zvinetso nemajini (#3, kana # 's 3 & 4)
mubvunzo zvinetso nemajini (#3, kana # 's 3 & 4)
1 gore 1 mwedzi wapfuura #851 by PAYSON
Hi, ndakanga ndiri nguva yakareba kubva pandakanga ndiri muno. Ndine matambudziko akawanda. Chokutanga, ndakashandura makombiyuta. Mushure mokunge, dzimwe dzendiza dzinofarira dziri kunyorera pamwe neye ganda chena rose. Hapana maitiro, hapana mukati (cockpit kana zvimwe ).Haponi kubhururuka pasina chigadziro Chechipiri, handigoni kuwana injini mukugadzirisa mhando dzekushanda.Ndinogona kushandisa chero ipi zvayo kana maviri majini pasina, asi isa 3rd kana 3rd uye 4th, chete inoshanda maviri.Ndinoda chaizvo kubhururuka dehaveland Dash 7, asi chete injini dzakasara dzinomhanya. Dzinomhanya zvisina maturo asi ndizvo.
1 gore 1 mwedzi wapfuura #852 by Dariussssss
Tinoda mamwe mashoko akawanda. Ndege ipi, iyo FSX version yakafanana ... Ndeye ndege iri mubvunzo ine bhuku, wakamboitevera uye zvakadaro ... Iyo ndiyo nzira chete yokubatsira.
1 gore 1 mwedzi wapfuura #855 by PAYSON
Inoita sokuti iwe wakarasikirwa nemhinduro yangu yapfuura. Ndinozviita zvose nebhuku uye / kana "kuverenga-ini". Sezvo kune imwe ndege, ndaifunga ndakati, chero ndege inenge inopfuura 2 injini. Ini ndinokwanisa kuisa X-56 kudzivirira kwechikwata kuvhara imwe nzira, uye imwezve. Chimwe nechimwe chinoshandura chinongokonzera zvose zvinotsigira injini kana injini dzose dzakanaka kuti dzirambe dzisingabatsiri apo dzimwe dzichikwira. Ndiri kushandisa sfx steam edition. Ndakataurirana newe nokuti ndakanga ndine dambudziko kwenguva yakareba yapfuura uye iwe wakandibatsira pane iyo. Ndinokumbira ruregerero nokuda kwekutora nguva yako mumamiriro ezvinhu aya, kungofunga kuti mumwe munhu angave akave nedambudziko rakafanana uye akariporesa. Hapana chakafanana nayo mu FAQ yako kana.
Ndinokumbira ruregerero uye maonero, PAYSON
1 gore 3 masvondo apfuura #869 by PAYSON
Ini ndichaedza kune imwe nzvimbo. Ndatenda.
1 gore 3 masvondo apfuura #870 by PAYSON
Whooooa !!! Ndakawana nzira yakarurama yekugadzirisa kugadziriswa kwekushandisa injini 1 thru 6. Zvaiva nyore. Thanks for the help :-(
1 gore 3 masvondo apfuura #872 by Gh0stRider203
kugoverana kana vamwe vane dambudziko iri?
1 gore 3 masvondo apfuura #873 by PAYSON
Ndingada zvakawanda zvakawanda. Ndege ipi, iyo FSX version yakafanana ... Ndeye ndege iri mubvunzo ine bhuku, wakatevera uye zvakadaro ... Ndiyo nzira chete yekubatsira.OS, ndege yekudzivirira ndege, nezvimwewo.
1 gore 3 masvondo apfuura #874 by PAYSON
Chaizvoizvo, zvose izvozvi hazvidi kudiwa. Chero ani zvake anoshandisa X-55 kana X-56 Saitek Advanced yokutambisa ndege yehurumende uye vari kutarisana nemichina ye 1 & 2 inyanzvi, ndakawana izvo zvandinofunga kuti ndirapa. Ndingadai ndakaisa izvi pakutanga, asi zvinotora nguva yekudzokorora izvi kugadzirisa nguva 20 kuratidza kwandiri inoshanda. Inoshanda. Kungosvinura "zvirongwa", enda kumapurogiramu akaiswa. Tora zvose zvigadziro, Kana mazamu ehompttle apera zvachose, uye iyo inoputika iri panzvimbo isina kusimba (iva nechokwadi chekusiya pini yekivha munzvimbo yayo yepakutanga), fambisa pfupa kusvika pakuzaruka, kudzokera kusina maturo, shure kuti uzarurire, wozodzokera kusina chekuita, cherechesa sechinhu chinowanzoitika, sarura zvirongwa, enda kune yako yaunoda ndege ye4 uye ugoedza. Tariro iyo inoshanda kwauri se ez sezvakaitwa kwandiri.
1 gore 3 masvondo apfuura #875 by PAYSON
Oo, pane boka rekurwisana rezvikepe zveWWII zvichionekwa uye zvinopera kubva kumhenderekedzo yeAustralia (YBBN).
Time chokusika peji: 0.157 mumasekonzi